BDA 16-30: iyo ongororo | Kufungisisa Kudzidziswa
Autori: Massimo Wisp, Damiano Angelini, Catherine Barletta Rodolfi, Antonella Gagliano, Enrico Ghidoni, Giacomo Stella
Kuparadzira imba: Joints OS
Rinosunungurwa gore: 2018
Nzvimbo dzinoongorora: Kuverenga, kunyora uye kunzwisisa
Zera renji: kubva pamakore gumi nematatu zvichikwira
Iyo BDA 16-30 ndeye bhatiri rekuyedza kuongororwa kwedyslexia uye dysorthography mukuyaruka nevakuru.
Iyi ingori bhatiri yemhando yepamusoro, nzira nzira iyo bvunzo dzakagadzirirwa uye nehunyanzvi hwesainzi kuutsigira. Kuenzaniswa neyazvino miedzo yekuongorora kuverenga uye kunyora mushure mechikoro chepakati, BDA 16-30 inopa:
Mashoko anozivikanwa: runyorwa rwemashoko matatu anodzokororwa nenzira dzakasiyana Kwete kuyedza bvunzo, asi basa rekusarura rinoonekwa iro rinotendera kuwana kukosha kwe "articulatory speed".
Dys-Mashoko: mazita maviri emazita ane mavara akachinja chinzvimbo ("baclone" pachinzvimbo che "balcony"). Rondedzero iyi inoda kuti ishandiswe nzira yehunyanzvi yekuverenga nekuti chidzidzo chinofanira kuverenga iyo chaiyo vhezheni yeshoko.
Dys-chidimbu: senge dys-mazwi, iyo dys-chidimbu zvakare inopa mazwi ane mavara akasiya misha, nekudaro ichidawo mune iyi kesi kumisikidzwa kwenzira yezwi, asi nemukana wekubatsira nemamiriro ezvinhu.
Rwiyo rwakanyungudika: ndima iyo mamwe mazwi (kazhinji maviri kana matatu) akabatanidzwa pamwechete ("nhasi izuva rakanaka rezuva"). Zvakare mune iyi kesi inofanirwa kumisikidza nzira rexical, kuwedzera kune ruzivo rwechimiro, kupatsanura mazwi.
Kuverenga chinyararire: pamwe muyedzo wakanyanya kutsva pakuongorora kuverenga muvechidiki nevakuru (isu takambotaura nezve kuongororwa kweiyo yekukurumidza kumhanya mupfungwa mune ino nyaya). Ndicho chidimbu chekuverenga mupfungwa umo mune zvimwe zviito zvinofanirwa kuitwa. Mutungamiri, nekumaka nguva yakatorwa kuita zviito, anogona kuwana pfungwa yekumhanya kwekuverenga pasina miganho inoenderana nekumhanya kwekutaura. Muchokwadi, sezvakatsanangurwa pano zvakanyanya, siringi mhedzisiro yakaratidzirwa kumhanya kwekuverenga zvinonzwika, nepo kumhanya kwekuverenga kwepfungwa kuchiramba kuchiwedzera apo zvidzidzo zvichipfuurira kunyangwe mushure mechikoro chesekondari.
Kudzvanywa nemitsara: mitsara gumi yekunyora uine zvinokanganisa basa. Izvo zvinoshandiswa kuongorora iyo yemubhadharo unoitwa unoitwa nevakomana nevasikana vane dysorthography.
kunzwisisa: chidimbu chine mazwi anopesana nezvinoreva rugwaro. Basa rechidzidzo ichi kuwana mazwi asina chokwadi.
Pamusoro peiyi bvunzo, kune zvekare zvekare zviyero (zvine zvinokodzera zvinoenderana nezera rezvidzidzo):
Kuverenga pasina mazwi
Kuverenga kwechimedu nekuona kusapindirana
Iwo mabvunzo ari matsva uye akagadzirirwa rezita rezera rezera (iyi haisi nyore zvakare-calibration yemiedzo yepuraimari chikoro).
Unyanzvi husina kumbofungidzirwa kusvika parizvino, sekuverenga chinyararire uye kuomarara kwechiratidzo, kunoongororwa.
Iyo miedzo inotarisisa kupfuura yakagadzirwa pamberi pekuedzwa uku; izvi zvakanyorwa mumabhuku esainzi.
Iyo bvunzo yekunzwisisa inoita kunge isinganyanyo kukanganiswa nehumwe hunyanzvi hunouya mukutamba mumiyedzo yekunzwisisa yakashandiswa kusvika ikozvino (ndangariro yenguva refu, ndangariro dzinoshanda…).
Muenzaniso uyu wakashongedzwa nezera uye chikoro.
Pane bhuku resainzi rekutsigira runyorwa bvunzo.
Izvo zvinopa chikwereti kune kuzivikanwa simulators.
Pamhepo uye yakabhadharwa nzira yekuviga, kupfuura iyo yatove yakakwira mutengo yebhatiri.
Iyo BDA 16-30 inokosha bhatiri rekuyedza kune avo vanobatanidzwa mukuongororwa kwehutachiona kwevechiri kuyaruka uye nedambudziko rekudzidza revakuru. Inodarika zviyero zviripo mumabhatiri ebvunzo apfuura munzvimbo ino uye pasina mubvunzo zvakakwana, asi zvakare inodhura kwazvo.
dyslexia yakura, dysorthography yevakuru, vakuru dyslexia bvunzo, mukuru dyslexia kuongorora, mukuru dysorthography kuongororwa, pfungwa yekuverenga kumhanya
BDA 16-30: ongororo2019-11-022020-10-21http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngKudzidziswa kwekuzivahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2019/11/38959975.bda_.jpg200px200px
Dyslexia mumakoreji vadzidzi uye vakuru vechidiki